Cameron.....: August 2021
ဒါက ရိုးရိုး ပဲပြားကြော်လေးလုပ်ထားတာ ပဲငပိနဲ့ချက်စားစား အချဉ်နဲ့တို့စားစား ချဉ်ငံစပ်ပဲသုတ်စားမလား ကြိုက်တာလုပ်စား ကျွန်မက ချင်းမိုင်အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲထဲ ကြက်သားအစားထည့်စားသေးတယ်
Chain Mai Kao Soi ချင်းမိုင် အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ
ပဲပြား ကြက်ဥ ပေါင်မုန့်ခြောက် တရုတ်နံနံ ငရုတ်ကောင်း ဆား ထည့်နယ်
ပဲပြားလုံးလေးတွေက တခါတလေ အချဉ်နဲ့ဒီတိုင်းတို့စားဖို့ တခါတလေ Vegan Tofu ball pasta လေးဘာလေးလုပ်စား ဒါမှမဟုတ် ဆီချက်ခေါက်ဆွဲထဲထည့်စား
ကောက်ညင်းအဖြူနဲ့ငချိပ်ရောပေါင်းထားတာနဲ့ ရှမ်းဟင်းနဲ့စား သက်သတ်လွတ် ငရုတ်သီးထောင်းနဲ့
ပဲပုတ်ကြက်သွန်ဖြူထောင်းအနှစ်ခတ်ထားတဲ့ ဆူကာညွှန့် ဟင်းချို
ကုန်ခါနီးကျ အဲလို ဟင်းရည်ထဲ ကောက်ညင်းထည့်စားပလိုက် ကောင်းမှကောင်း ရှမ်းပြည်မှာ ကောက်ညင်း စားပြီး ဝမ်းမချုပ်ဘူးဆိုတာ ဒီလို အရွက်များများ အရည်များများ စားကြလို့လေ
ရှမ်းခေါက်ဆွဲအနှစ် မဟုတ်ရင် စပါဂီတီအနှစ်လုပ်ဖို့ ခရမ်းချဉ်သီး ငါးဆယ်သားလောက်ကို အစေ့ထုတ်ထပ်ခြမ်းခြမ်းပြီး နူးအောင်ပြုတ် Tomato Puree လုပ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲသိမ်းထားတယ်
ကျွန်မတို့ ဝါထပ်ထားပေးဖူးတဲ့ ဦးဇင်းက ပေးတဲ့ မကွေးမြေလတ်က မြေပဲဆံတွေ ရထားတာရှိတယ် ...။ မြေပဲတွေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် အလုံးအကြီးအသေးရွေးပြီး နေလှန်းပြီး ဗူးနဲ့သေချာသိမ်းထားတယ် အဆံသေးတွေကို မြေပဲငါးပိချက်ချက်စားလိုက်တယ်....။ အဆံလုံးကြီးတွေကိုတော့ လှော်ပြီး ပဲပုတ်ကြော်နဲ့ မြေပဲဘလာချောင်ကြော် တစ်ပတ်နှစ်ပတ်စာစားဖို့လုပ်ထားတယ်...။ ပဲတွေကြိုက်တော့ အစုံဝယ်စားဖြစ်တယ် ကုလားပဲ ပဲနီလေး ပဲစိမ်းငုံ နဲ့ Black Eye Pea လိုပဲလဲဝယ်ထားတယ်...။ အဲပဲတွေကို ကောက်ညင်းနဲ့ပေါင်းစား ဒီတိုင်းထိုင်းထန်းသကြားနဲ့အချိုပွဲပြုတ်ပြီး အုန်းနို့ဆမ်းတာလဲ လုပ်စားဖြစ်တယ်...။ နောက်ထပ် ချက်စားဖြစ်တဲ့သက်သတ်လွတ်ဟင်းတွေကိုလဲ လာတင်ပေးပါဦးမယ်....။
Posted by Cameron at 08:21 No comments:
လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာကတည်းက အကြိမ်ကြိမ်ရောက်လာခဲ့ဖူးသော စာအိတ်တွေကို ဖွင့်ဖောက်ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်မကို တစ်ခါကလေးမှ သူ့ဆီစာပြန်မရေးခဲ့ဘူးလို့ ယိုးစွပ်တဲ့ စာသုံးစောင် ကျွန်မဆီကိုတပြိုင်ထဲရောက်လာခဲ့တယ်...။
အရင်စာတွေတချို့ကို ကျွန်မပြန်စာရေးခဲ့ဖူးပါတယ် သူဖတ်လိုက်ရလျက်သားနဲ့ သတိမပြုမိတာလား အချိန်တွေကြာသွားလို့မေ့သွားခဲ့တာလား ဒါမှမဟုတ် မသိချင်ဟန်ဆောင်ခဲ့တာလား...။ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဒီယောကျာ်းဟာ ဟန်ဆောင်မှုကင်းတဲ့ ဘာကိုမဆို အားမနာတမ်း နစ်နစ်နာနာပြောပစ်တတ်တဲ့ သူ့စကားအရ အရိုင်းစိုင်းသတ္တဝါတစ်ကောင်ပါ....။ ဟုတ်တယ် ကျွန်မအမြဲတမ်းသိနေခဲ့တဲ့ လူသားသတ္တဝါလေးတစ်ယောက်....။ အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဆုံ လမ်းခွဲ ပေါက်ကွဲ လွင့်စင်ခဲ့တာတွေကို ဟိုး....ဝေးဝေးမှာ ထားပစ်ခဲ့ပြီပဲ....။ အဲအကြိမ်ကြိမ်ထဲကလို နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုတာကို သူပညတ်ခဲ့တဲ့ အရိုင်းစိုင်းသတ္တဝါမလေးက ......... .............. ............... ........။
စာအိတ်လေးတွေ သုံးခုမှာ..... ပထမတစ်စောင်က သူ့ခံယူချက်ထဲက လက်မလွတ်သင့်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအတွက် သူကိုယ်တိုင်တောင်မသိလိုက်ဘဲ ကျော့ကွင်းပါးပါးလေးနဲ့ ဖမ်းယူဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ....။ ဒုတိယတစ်စောင်က ပထမစာမှာ ရင့်သီးခက်ထန်မှုတွေ ပါတယ်လို့သူထင်လို့ ပြန်ဖြည်ထားတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ သူ့ကိုယ်သူ ပြန်သုံးသပ်မှုတွေ....။ တတိယတစ်စောင်ကတော့ ကျွန်မပိုင်ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ ခေါင်းစဉ်အရှည်ကြီးတပ်ပြီး ရေးထားတဲ့ အစီအစဉ်မကျတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်....။
တစ်ခါတစ်လေ ".......................... " တစ်ယောက်လို
အဲဒီနေ့ကပျော်နေတဲ့ ငါဟာ မတွေးမိခဲ့ဘူး..."
အဲလို Censor မလွတ်တဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့ ကျွန်မကို ခိုင်းနှိုင်းတတ်တဲ့ သူ့အရည်အချင်းဟာ တစ်သက်တာမေ့ပစ်ချင်စရာမရှိအောင် သူအစစ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြချက်....။ အဲလိုသူကအရသာ ရှိရှိရေးထားတဲ့ ဥပမာအလင်္ကာကို ကျွန်မကလဲ အရသာရှိရှိဖတ်ရတာ သဘောကျတယ်...။ ဒီတော့မှ သူပြောတဲ့ "အရိုင်းစိုင်းသတ္တဝါမလေး" ဆိုတာ ကျွန်မတကယ်ပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်....။
"ငါတို့က အသက်တွေသာ ကြီးလာပေမယ့်
ခံစားမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုသာ ကလေးဘဝတုန်းကလို လွတ်လပ်ခွင့်တွေပေးထားမယ်ဆိုရင်
ဘဝကြီးကပိုနေသာစရာကောင်းမယ်လို့ငါထင်တယ်" ဒီစာရေးနေတဲ့အချိန် ငါတကယ်ငိုမိနေခဲ့တယ် တဲ့……
အနားမှာရှိရင် ရှုပ်ပွနေတဲ့ သူ့ဆံပင်ကောက်ကွေးတွေကြား လက်ဆယ်ချောင်းစလုံးထိုးသွင်းပြီး သူ့နဖူးကို အနမ်းနဲ့ နှစ်သိမ့်ပေးနိုင်ခဲ့လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်....။ ပြီးတော့ ကျွန်မရဲ့နှလုံးခုန်သံကိုလည်း သူ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကြားရလိမ့်မယ်....။
ကျွန်မရဲ့ပြန်စာဟာ ကျားရေခြုံထားတဲ့ အဝါရောင်လိပ်ပြာတစ်ကောင်အတွက် စိတ်ကျေနပ်မှုရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...။
တကယ်တော့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ဟာ အပြန်အလှန် Victim တွေဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်ခဲ့ကြရ...........။
Posted by Cameron at 08:25 No comments:
Dear My Guardian Angel…..
ဆံပင်ညှပ်လို့ရတဲ့အချိန်တုန်းက ဆိုင်ရောက်ခဲ့ပေမယ့် မညှပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး....။ ညှပ်ခ နှစ်သောင်းငါးထောင်ကိုနှမြောတာလဲပါတယ်....။ တခြား သုံးထောင်တန်တွေဆီမှာလဲ ကိုယ့်ဆံပင်ကိုမရင်းရဲဘူး...။ အစွဲလန်းတွေနော် တဏှာမပြတ်သေးသရွေ့က အလုပ်ကိုရှုပ်နေဦးမှာလူက....။ ငယ်စဉ်ကကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မှန်ကြည့်ပြီး ညှပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိနေလို့ ကျောပေါ်ရောက်နေတဲ့ဆံပင်ကို ဂုတ်ထိညှပ်ပစ်လိုက်တယ်...။ အသက်ကြီးလာရင် ဘာလို့ ဆံပင်အရှည်တွေမထားဘဲ အတိုညှပ်လိုက်ကြရတာလဲဆိုတဲ့ ငယ်တုန်းကသိချင်ခဲ့တဲ့ ခံစားမှုကို ခုလက်တွေ့သိလာခဲ့တယ်....။
ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တော့ ခုကာလမှာနေထိုင်တတ်အောင်ကိုယ့် Guardian က အရင်ကတည်းက လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တာပဲလို့ သတိပြုမိသွားတယ်....။ သူများတွေအနံ့ပျောက် ဘာညာဖြစ်တာ ကိုယ်လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကတည်းက ကြိုဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီးသား O2 ကျတာတွေကလဲ ချင်းပြည် ကန်ပက်လက် နတ်မတောင်သွားတက်တုန်းက ခံစားခဲ့ဖူးပြီးပြီ....။ အဲတုန်းက Oxy Metre နဲ့တိုင်းကြည့်ရင် ဘယ်လောက်တောင်ကျနေမလဲမသိ ခြေနှစ်လှမ်းသုံးလှမ်း လှမ်းပြီးတာနဲ့မော အသက်ရှုမဝ ရေလေး တစ်ငုံနှစ်ငုံနဲ့ အသက်ဆက်ပြီးတက်သွားလိုက်တာ တောင်ပေါ်ရောက်သွားခဲ့တယ်...။ တော်သေးတယ် သတိလစ်မသွားခဲ့တာ....။ ဒီတော့ပြန်တွေးကြည့်တာ ခုကိုးဗစ်လူနာတွေခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာမျိုးက ကျွန်မရဲ့ Guardian ကကြိုပြီးလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပြီးသားပဲလို့....။ ဘဝမှာ ဆန်းကြယ်တာတွေကအများကြီးပဲ ရှင်းပြလို့မရတာတွေလဲရှိတယ်...။
အဲလိုတွေကြိုတင်ခံစားခဲ့ဖူးလို့ ခုချိန်မှာ ကိုယ်ချင်းစာနိုင်တဲ့စိတ်အပြည့်နဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ အင်အားနဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ကူညီခွင့်ရတာဟာလည်း Guardian Angel လေးရဲ့ ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါပဲ.....။ ခုဆိုမနက်မိုးလင်း မျက်စိနှစ်လုံးဖွင့်တာနဲ့ ကျွန်မဒီနေ့လဲ အသက်နောက်ထပ်တစ်ရက်ရှင်ခွင့်ရသေးတာပါလားလို့ အောက်မေ့ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေးဇူးတင်တတ်လာတယ်...။ အပင်လေးတွေနဲ့စကားပြောရင် ထူးခြားတဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေကို သိလာတယ်....။ ကျွန်မက အိမ်မှာဘာပင်စိုက်စိုက် နောက်ဆုံတော့ သေတာပဲ....။ ခုအဒေါ်အငယ်စိုက်ပေးခဲ့တဲ့ စံပါယ်ပန်းပင်လေးက သူလဲပြန်သွားရော အရွက်တွေဝါ ပင်စည်မှိုလိုက်နဲ့ နောက်တော့ ဆပ်ပြာရည်လေးဖြန်းပေးရင်း သူနဲ့စကားလေးပြောပြောပေးတယ်....။ ခုထိရှင်သန်နေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အရွက်လေးတွေဝေဆာပေးပါ ပန်းလေးတွေလဲပွင့်ပေးပါ 😍…. အဲလို မနက်တကြိမ် ညနေတစ်ကြိမ် ဘုရားပန်းအိုးရေလဲရင် သွန်ပစ်ရမယ့်ရေတွေလောင်းပေးရင်း စကားပြောပေးတာ....။ သိပ်မကြာဘူး အကိုင်းခက်တွေအသစ်ထွက် အရွက်တွေစိမ်းလန်းလို့ အပွင့်တွေပွင့်လိုက်တာ ဘုရားကပ်ရပါတယ်....။ ဘယ်နေရာကိုဖြစ်ဖြစ် ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် Attitude နဲ့ Gratitude ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကို သိမြင်တတ်လာရတယ်....။ သတ္ထန္တရကပ်နဲ့ ရောဂန္တရကပ် ဆိုက်နေတဲ့ကာလမှာ သင်ခန်းစာတွေလည်းအများကြီးရ မသိရသေးတာတွေလည်း အများကြီးထပ်သိရ...။
ဟင်းတခါမှမချက်ဖူးတဲ့ ကျွန်မ Soulmate လည်း သူ့မိဘတွေကိုပြုစုရင်း ဟင်းတော်တော်များများချက်တတ်နေပြီ...။ Sandwich 🥪 Burger 🍔 Salad 🥗 Spaghetti 🍝 သူကြိုက်တဲ့ဘိုစာတွေကိုတောင် လုပ်တတ်နေပြီ....။ ကျွန်မကတော့ Third Wave မှာ အပျင်းကြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်တာနဲ့ စာရေးတာကိုပဲ ပိုလုပ်ဖြစ်တယ်....။ အမလေး Yoga 🧘‍♀️ လည်းမလုပ်ဖြစ်ပါဘူး...။ ဒါပေမယ့် မနက်ဟင်းချက်ပြီးရင် တအိမ်လုံးကို ပိုးသတ်ဆေးရည်နဲ့ ကြမ်းတွေတိုက်တာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရသလိုပါပဲ ချွေးပြိုက်ပြိုက်ကျလို့...။ ပြီးရင်ခနနား သံပုရာလက်ဖက်ရည်ကြမ်းနှစ်ခွက်လောက်သောက်ပြီး ရေမိုးချိုးလိုက်တယ်...။ ညနေပိုင်းထပ်မချိုးတော့ဘူး အခန့်မသင့်ရင် အအေးပတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးလေ...သတိနဲ့နေနေရတာ...။ ညနေခြောက်နာရီ မထိုးခင်ညနေစာအပြီးစားသောက်ပြီး ဘုရားသောက်တော်ရေလဲ ပန်းအိုးရေလဲ ပန်းပင်ရေလောင်း ဘုရားကျောင်းဆောင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်...။ ခုနှစ်နာရီကနေ ရှစ်နာရီထိက စာဖတ် သီချင်းနားထောင် ...။ ရှစ်နာရီကနေစပြီး ဘုရားရှိခိုး မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော် တရားထိုင် နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆီ မေတ္တာလှိုင်းပို့ပေးတယ် ဆုတောင်းပေးတယ်....။ ပြီးရင် သကြားမပါတဲ့ ဘီစကစ်မုန့်တစ်ချပ်စား ရေတစ်ခွက်သောက်ပြီးမှ အိပ်ရာဝင်တယ်....။
လူက စည်းကမ်းတကျလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်....။ အချိန်ကာလနဲ့အခြေအနေက သင်ကြားပေးလိုက်တာ ပုံသွင်းပေးလိုက်တာဆိုပေမယ့် ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးမှရတာ မဟုတ်လား...။ ကာယကံရှင်သည်သာ အဓိက...။ အိပ်ရာထဲရောက်တော့ ဆရာသစ္စာနီရဲ့စာအုပ်လေးနဲနဲပါးပါးဖတ် ဆရာမျိုးဆွေသန်းရဲ့ ဝေါလ်မှာတင်တဲ့ ပန်းချီကားတွေအကြောင်း ပုဂံအကြောင်းတွေသွားဖတ် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ယောက်အကြောင်းသွားစပ်စု အင်တာဗျူးတွေကြည့် ပြီးမှအိပ်တာ ၁၁ - ၁၁:၃၀ လောက်မှအိပ်...။ ဘဝမှာ ငွေအများကြီးမချမ်းသာချင်ဘူး စားဖို့သောက်ဖို့နဲ့ ဆေးကုဖို့ ငွေပမာဏတစ်ခုထိရှိရင်တော်ပြီ....။ ကိုယ်ကလူ့လောကမှာ ဘယ်လောက်ထပ်နေရမှာလည်း ဆယ်နှစ်လား ဆယ့်ငါးနှစ်လား ဘာမှမသေချာဘူး နောက်နေ့အသက်ဆက်ရှင်ရဦးမလားဆိုတာလည်း မသေချာဘူး....။ ခုဆို မလိုအပ်တာဆိုဘာမှသိပ်မဝယ်ဖြစ်တော့ဘူး အသက်ဆက်ဖို့ဆေးဝါးနဲ့ စားသောက်ကုန်တွေကိုပဲ ဦးစားပေးဖြစ်တော့တယ်....။
Guardian Angel 👼 ကိုလည်း ဒီပို့စ်လေးနဲ့အတူ တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။ ကျွန်မကို အစဉ်တစိုက် ကောင်းသောအတွေး ကောင်းသောအသိများကို အမြဲပေးခဲ့တဲ့အတွက်....။ Evil 👿 ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ် တခါတလေ စိတ်ရိုင်းလေးသွင်းပေးပြီး မလုပ်ဖူး မကြုံဖူးတာတွေကို မြည်းစမ်းခွင့်ပေးလို့....။ သူ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရမယ် အဆိုးလေးလဲလုပ်သင့်တာလုပ်ရသေးတယ် အရမ်းကောင်းနေရင် ကိုယ့်ကိုမနာလိုဖြစ်တတ်တယ်လေ...။ 💯 အပြည့် ကျွန်မ မကောင်းခဲ့ဖူးပါ.... ။
Bonus : အလှမပြင်ရတာနှစ်ချီနေပြီ မိတ်ကပ်တွေဘာတွေလဲ ဒိတ်တွေအောက်
Love you my Angel 👼
Posted by Cameron at 08:52 No comments:
သီချင်းတွေနားထောင်ရတာကြိုက်တော့ You Tube ကနေ ထိုင်းကလွှင့်တဲ့ The Mask Singer တွေ Season လိုက်ကြည့်ဖြစ်တဲ့အထဲ ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ Season 1 က Group D ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် Peck Palit Choke က သားပိုက်ကောင်မျက်နှာဖုံးနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီး Group D Final မှာ Semi ဝင်သွားခဲ့တယ်....။2017 ခုနှစ် Jan - Mar မှာလွှင့်ခဲ့တယ်....။ Peck က ဒီပြိုင်ပွဲမဝင်ခင် ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကတည်းက ထိုင်းမှာတကယ့် အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ ဂီတအနုပညာရှင်တွေကိုမွေးထုတ် မြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့တဲ့ Grammy ကထွက်တဲ့ Pop နဲ့ R&B အဆိုတော်တစ်ယောက်....။ ဒီ The Mask Singer ပြိုင်ပွဲမပြိုင်ခင် ရှစ်နှစ်လောက်ကတည်းက နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့ဖူးတာက Let's Move ဆိုတဲ့ အယ်လ်ဘမ် အဲကတည်းက ဒီလောကကနေ ပျောက်သွားလိုက်တာ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ သူမျက်နှာဖုံးချွတ်ပြီးနောက် တကျော့ပြန် အံ့မခမ်းမှုတွေ မထင်မှတ်စရာတွေ တရဟောရောပါး ရောက်လာစေခဲ့တာပဲ...။ သူနောက်ဆုံးထွက်ထားခဲ့တဲ့ Let's Move ဆိုတာ တကယ်တော့ သူ့ဘဝအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုတစ်ခုထပ်ဖြစ်လာဖို့ နိမိတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ နာမည်လေးပါပဲ...။
2010 ခုနှစ်လောက်က Grammy ကထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ Let's Move ဆိုတဲ့ အယ်လ်ဘမ်ဟာ ရောင်းမကုန်တာကြောင့် သိမ်းမထားနိုင်တော့ဘဲ အချပ်ပေါင်းသိန်းသန်းချီ ဒီတိုင်း စက်နဲ့ကြိတ်ပြီးဖျက်စီးပစ်ခဲ့ကြရတယ်....။ ကဲ...အခု Peck လဲ The Mask Singer မှာ Kangaroo မျက်နှာဖုံးကိုလဲချွတ်ရော အဲ CD တွေကို သောက်သောက်လဲ Pre Order တွေပြန်ဝယ်ကြလို့ Grammy ကအားချင်း ပြန်ထုတ်ရတဲ့အထိ သူရဲ့ အောင်မြင်မှုကြီးက ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ပါပဲ....။ အသက်၃၃ နှစ်မှာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အနုပညာရှင်တိုင်းလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင် ရလိုက်တယ်...။ တစ်သက်လုံးမရခဲ့ဖူးတဲ့ဆုတွေလဲ 2017 ခုနှစ်ထဲမှ စုပြုံရ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားဆု ဘာဆုညာဆုတွေရပေါ့ ...။ ဒီလို ရုတ်ချည်း နေ့ချင်းညချင်းထဖြစ်တော့ Control လုပ်နိုင်အောင် ထိုင်းဝါရင့်အဆိုတော်Bird ထုံချိုင်းက Peck ကိုစကားပြောဖို့ခေါ်တွေ့ခဲ့တယ်....။ အဲဒီနေ့က Bird ရဲ့ ဆုံးမဩဝါဒတွေလေးနာရီလောက်ခံယူပြီး အထဲကပြန်ထွက်လာတော့ ဝင်သွားတုန်းကနဲ့ပြန်ထွက်လာတာမှာ တစ်ယောက်ဆီဖြစ်သွားသလို ခံစားလိုက်ရတယ်....။ အတွေးအမြင်အသစ်တွေ ပြောင်းလဲမှုတွေ မသိတာတွေကို အများကြီးသိခဲ့လိုက်ရလို့ပါပဲတဲ့...။
သူက 2006 ခုနှစ်မှာ အနုပညာလောကကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာ တီဗီတစ်ခုက Disney ကလေးအစီအစဉ်မှာ Presenter လုပ်ဖူးခဲ့တယ် ကာတွန်းကားတွေမှာ အသံဘာသာပြန်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်... Grammy မှာ သီချင်းတွေပို့ပြီးလဲ အကြိမ်ကြိမ် ပယ်ချခံခဲ့ရဖူးတယ်....။ အဲတုန်းက Peck ရုပ်ကလေးက ခုလိုမဟုတ်သေးဘူး ခုက နှစ်ကြိမ်ခွဲစိတ်ထားပြီးလို့ သူ့ကို နာမည်ပြောင်တောင်ပေးကြတယ် အမြဲတမ်းမျက်နှာအသစ်နဲ့လူတဲ့...။ တော်ပြီ ကျွန်မ သူ့အကြောင်း အရှည်ကြီး အသေးစိပ်မပြောပြတော့ဘူး .....။ သူ့ဘဝအကြောင်းသိချင်ရင် Google ကြည့်ပါ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ Activities တွေကိုလေ့လာကြည့်ပါ အင်တာဗျူးတွေနားထောင်ကြည့်ပါ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်...။ You Tube ကသီချင်းကောင်းတွေကိုတော့ အောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်....။ Peck က အခု ၃၇နှစ်ရှိနေပြီ.... သူလဲအရွယ်မငယ်တော့ဘူး ခုထိတော့ သူ့ရဲ့ သိန်းသန်းမကသော Fan Club တွေကတော့ ရှိနေဆဲပါပဲ.....။ ပုံမှန်ဆို ကျွန်မက ကိုးရီးယားအရမ်းဆန်တဲ့ရုပ်ရှိတဲ့ ယောကျ်ားမျိုးကိုမကြိုက်ဘူး.... ဒါပေသိ ချွင်းချက် ဒီတစ်ယောက်ကိုတော့ ရုပ်ထက် သူ့အရည်အချင်းနဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို နှစ်သက်သဘောကျမိတာ....။
ကျွန်မက သဘာဝကျကျ ကိုယ့်ပုံစံအတိုင်းကိုယ်နေထိုင်တတ်တဲ့ ဟန်မဆောင်တတ်တဲ့ တုတ်ထိုးအိုးပေါက် တခါတလေကြမ်းကြုတ်ပြီး ကြင်နာတတ်တဲ့ ယောကျာ်းမျိုးကိုသဘောကျတယ်....။ ဉာဏ်ရည်မြင့်မားပြီး အတွေးအခေါ်ကောင်းတဲ့သူကိုကြိုက်တယ်....။ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အရာ ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကို ဘယ်သူ့မှမငဲ့ကွက်ဘဲ(အများကိုမထိခိုက်ရင်) လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ပစ်လိုက်တဲ့သူကို သဘောကျတယ်...။ ရောက်တဲ့နေရာတိုင်း ကျရာပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ဖြစ်နေထိုင် စားသောက်နိုင်တဲ့သူကိုကြိုက်တယ်....။ အကောင်းဆုံးနဲ့ အဆိုးဆုံးဆန့်ကျင်ဖက် နှစ်ခုစလုံးရှိနေတဲ့ ယောက်ျားမျိုးကို သဘောကျတယ်...။ ဒီယောကျာ်းက အဲလိုသူမျိုး....။
OMG!!!! Crush ဆိုတာ ဘယ်အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ ရှိနေဦးမှာလဲလို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အော်ဟစ်မေးကြည့်မိတယ်....။ စကားမစပ် ညက ကျွန်မ IG ကနေ မက်ဆေ့လေးတက်လာတဲ့အသံကြားလို့ ဖုန်းယူဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ P ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်မညဖက် တရားထိုင်တိုင်း မေတ္တာလှိုင်းပို့ပေးတဲ့ အကောင်ပေါက်ကလေးလေးက အန်တီရေ... ဒီနေ့ပဲ ၁၄ ရက်ပြည့်လို့ ပြန်စစ်တာ N ဖြစ်သွားပြီတဲ့.....။ ဝမ်းသာပီတိ ဂွမ်းဆီထိရပါ၏.....။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်ပြီးတော့ ဂရုတစိုက်နေနေပါ... ကိုးဗစ်က မာယာများတယ်ကွယ့် .....လုံးဝမပေါ့ပါနဲ့လို့ ထပ်မှာရသေးတယ်....။ ကလေးဆိုတော့ ပျောက်ပြီဆိုပြီး ဝမ်းသာလွန်နေမှာစိုးလို့...ပြောမယ့်သာပြောရတာ အဲကလေးက ကိုယ်တွေထက် တော်လို့ ဗဟုသုတရှိတဲ့သူ...ပညာတတ်....။ သွေးစစ်တာတို့ အဆုတ်ကို ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်တာတို့တွေလဲ လုပ်ပေးရမယ်...။ ဒါမှ ကိုယ့်ခန္ဓာအတွင်းပိုင်းမှာ ဘာတွေကိုဖျက်စီးထားလဲ ဘာကိုပြန်ပြုပြင်ပေးရမလဲသိရမှာ....။ မမြဲသောတရားတွေ.....:( အဲဒီညကပဲ P ဖြစ်တဲ့ အမျိုးထဲကဦးလေးတစ်ယောက်ကိုလဲ အာရုံပြုပြီး မေတ္တာလှိုင်းပို့တာ လုပ်ပေးဖြစ်တယ်....။ ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးရက်ကလဲ အမျိုးမကင်းတဲ့ ကြီးတော်ကြီးတစ်ယောက်ကိုပါလုပ်ပေးဖြစ်တယ်....။ သူ့ကို အာရုံပြုပြီးဆုတောင်းပေးတော့ သူ့ကို အလင်းရောင်များများနဲ့ ဘုရားခန်းတစ်ခုရှေ့မှာ ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နဲ့ ဘုရားဝတ်ပြုနေတာကို နောက်ကျောကနေမြင်တယ်...။ နောက်တော့ သူကာကွယ်ဆေးထိုးထားဖူးတော့ သူများတွေလို ဝေဒနာသိပ်မခံစားရကြောင်းသိရတယ်...။ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာက ကျွန်မကိုမွေးပေးခဲ့တဲ့ ဆရာမကြီး (တာချီလိတ်မှာနေတာ) ကိုးဗစ်ရှိမှန်းမသိဘဲ ကာကွယ်ဆေးသွားထိုးတာ သုံးရက်မြောက်မှာ ချောင်းတွေတအားဆိုးပြီးမောလာတယ် သတင်းကြားကြားချင်း နှစ်ရက်ဆက်တိုက် မေတ္တာလှိုင်းပို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပေမယ့် ဒီမနက်မှာပဲ ဆုံးသွားခဲ့ပြီတဲ့....။ အရင်လို အသိထဲကနာရေးကြားရင် တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားတာတွေ ဘာတွေမဖြစ်တော့ဘူး အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ ရဲ့ မမြဲခြင်းသဘောတွေနဲ့ သိမြင်တတ်လာတယ်...။
ပြောမယ့်သာပြောတာ မေတ္တာလှိုင်းပို့ပေးရမယ့် ထပ်တိုးလာတဲ့သူတွေရှိသလို ဝေဒနာတွေ သက်သာသွားတဲ့သူလဲများတော့ တကယ်ဝမ်းသာရပါတယ်....။ ကျွန်မဒီလိုလုပ်ပေးတာကို အားလုံးကိုမပြောပြထားဘူး တချို့ သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲ...။ တချို့က ဒီလိုအကြောင်းအတွေကို မယုံတဲ့သူတွေလဲရှိတယ်လေနော့....။ သူငယ်ချင်းအစ်မတစ်ယောက်ကတော့ ကောင်းတယ်ညီမ ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာ သူများရတာထက် ကိုယ်က အရင်ဦးဆုံး ကုသိုလ်ရနေပြီတဲ့...။ ကျွန်မကဖြင့် ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပေးဖို့ စဆုံးဖြတ်ကတည်းက ကုသိုလ်ရချင်လို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှမပါခဲ့ဘူး စဉ်းတောင်မစဉ်းစားခဲ့ဖူးဘူး...။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကို တတ်နိုင်တဲ့ဖက်က ကူပေးချင်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုပဲရှိတာ...။ စိတ်စေတနာစွမ်းအားရဲ့တုန့်ပြန်မှုကောင်းရလဒ်ကိုသိရတော့ ကျေနပ်မိတယ်....ဒီလောက်ပါပဲ...။
Peck Palit Choke ပို့စ်ကို အမှီပြုပြီး ကိုယ့်အကြောင်းတွေ အာလူးများသွားပြီ....။ တော်လောက်ပြီနော်....:)
ဒီ This is Love ဆိုတဲ့ Peck ရဲ့ Single သီချင်းလေး MV ရိုက်မယ်လုပ်တော့ သူ့ပရိတ်သတ်ထဲက ဆွံ့အနားမကြားတစ်ယောက် သူ့ကိုလာဖက်ပြီးနှုတ်ဆက်တာကြုံခဲ့ဖူးတာကိုအမှတ်ရပြီး ဒီသီချင်းလေးကို သူတို့တွေအားလုံး နားထောင်လို့ရအောင် နားမကြားရတဲ့သူတွေလဲ ကြည့်ရင်းနဲ့ အဓိပ္ပါယ်နားလည်အောင်ဆိုပြီး Body Language နည်းနဲ့ ကကွက်လေးထွင်ထားတာ...။ ကကွက်လေးတွေက သိပ်လှပြီးကြည့်လို့လည်းကောင်း ဆွံ့အနားမကြားသူတွေပါ နားလည်နိုင်တဲ့ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်...။ အပေါ်မှာတင်ပေးထားတဲ့ Live Show လေး ဆွံ့အနားမကြားကျောင်းကကလေးတွေပါပါတယ် ကြည့်ပြီး ကရုဏာတက်လို့ မျက်ရည်ဝဲမိသလို Peck အတွက်လဲ မုဒိတာတွေပွားမိတယ်...။ အင်တာဗျူး တစ်ခုမှာပြောပြဖူးတာလေးရှိတယ် တစ်ရက် သူခရီးသွားအစီစဉ်တစ်ခုကိုထိုင်ကြည့်ရင်း အဲဒီနေရာကိုသွားချင်စိတ်ဖြစ်လို့ ချက်ချင်းပဲအထုပ်ပိုးနဲ့ထသွားလိုက်တာ အဲနယ်ကိုရောက်တော့ သူတခါမှမမြင်ဖူးခဲ့တဲ့ လူနေထိုင်မှုတွေ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေကို ပါသမျှငွေတွေစွန့်ကျဲခဲ့ နောက်ဆုံး အိမ်ထဲမှာတစ်ယောက်ထဲ နေနေရတဲ့ မျက်မမြင်အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရင်း သံဝေဂတွေရပြီး ချက်ချင်းပဲ ဘန်ကောက်ပြန်ရောက်တာနဲ့ တန်းပြီး မျက်စေ့ဘဏ်မှာ မျက်ကြည်လွှာဝင်လှူခဲ့ဖူးတယ်တဲ့....။ This is Love ❤️
as if the world was spinning fast
even though nothing moves
Like we talkedalot
even though there is no sound
as if he didn't hear anything
besides the sound of the heart
It's like there's too much to describe.
But I can recognize it, yeah
Even if this feeling is gone
From the past life, eh hey
It was this feeling that was clear.
Again as if it had just happened yesterday.
This is love (I know this is love)
นี่แหละคือความรัก (I know this is love)
Is the sound that is loud inside my heart (I know this is love)
คือเสียงที่ดังข้างในหัวใจ (I know this is love)
It's like there's something that makes me feel
When she appears in the heart, yeah
I really don't know what tomorrow will be.
whether to face good or bad
I just know that every minute from now on will never be the same
Only you in my heart, yeah
From the past life, oh
It was this feeling that became clear again.
as if it just happened yesterday
Is the sound that is loud in my heart (I know this is love)
When you appear in my heart, oh hey
เมื่อเธอปรากฏในหัวใจ โอ้ว โฮ้ว
It's the sound of love that's been lost, oh baby
มันคงเป็นเสียงของความรักที่เคยหายไป Oh baby
You must be the word love that your heart is looking for, hoo
When you appear in my heart, yeah, yeah, hey
เมื่อเธอปรากฏในหัวใจ เย้ เย้เฮ้
เมื่อเธอปรากฏในหัวใจ เย้ เย้เฮ
I know this is love baby เฮ
မျက်နှာကို နှစ်ကြိမ်ခွဲစိပ်ထားဖူးလို့ Oh Pa ရုပ်တော့
Peck က တိုက်ကွမ်ဒို ခါးပတ်နက်အဆင့်ရထားခဲ့ဖူးသူပါ
I will cheer you up forever !!!!
Love You Peck Palit Choke.
Posted by Cameron at 19:56 No comments:
(ဩဂုတ်နဲ့ ဝါနေတဲ့ လိပ်ပြာတွေ) ဆရာမျိုးဆွေသန်းရဲ့ Facebook ကနေကူးလာတာ.....
ဩဂုတ်လရောက်တာနဲ့ ဗလာစာအုပ်လေးထဲမှာကြိုက်လို့ ကိုယ့်လက်ရေးနဲ့ကိုယ် ကူးရေးထားတဲ့ စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာထဲမှာ ကူးမိတဲ့ "မြစ်ကုန်သည်ရဲ့ ဇနီး" နဲ့ ရဝေရှင်ထွေးရဲ့"ကြာတော့သည်လည်း မောင့်စကား"က အလိုလိုမှ အလိုလိုကို သတိရလာတော့တာပါပဲ။
(မြစ်ကုန်သည်ရဲ့ ဇနီး . . . . ပေးစာ)
ကျွန်မဆံပင်ကို နဖူးမှာတန်းလန်းဖြတ်ရဆဲပဲ ရှိစဉ်က
ကျွန်မရှေ့တံခါးမှာ ကစားခဲ့တယ် ပန်းတွေနှုတ်တမ်း
ရှင်ရောက်လာတယ် ဝါးလုံးနဲ့ထောက် မြင်းစီးတမ်း
ကျွန်မထိုင်တဲ့နား လျှောက်လာ၊ ဆီးသီးပြာပြာနဲ့ ကစား
ကျွန်မတို့ ချိုကန်ရွာမှာ ဆက်နေခဲ့ကြတယ်
လူသားငယ်နှစ်ဦး အမုန်းမဲ့ သံသယမဲ့။
ကျွန်မရှင့်ကို သခင့်ကို လက်ထပ်ခဲ့
ကျွန်မ မရယ်ဘူး ရှက်တတ်လို့ ခေါင်းကို ငုံ့ကာ
နံရံကိုကြည့်နေမိ၊ ခေါ်ကြရဲ့ အကြိမ်တစ်ထောင်
ကျွန်မ မျက်နှာ ရှစ်ခေါက်ချိုးမလုပ်တော့ဘူး
ကျွန်မ မြူမှုန်နဲ့ ရှင့် မြူမှုန်နဲ့ နှောစေချင်တယ်
ထာ၀ရ ထာ၀ရ ထာ၀ရသာ၊
ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်မ မျှော်စင်တက်ရမှာတုန်း။
ဝေးလံတဲ့ ကူတိုးအင် ကို
ရှင်သွားတာ ငါးလ ကြာခဲ့ပြီ
ရှင်ထွက်သွားတော့ ခြေကို ဒရွတ်ဆွဲလို့
တံခါးပေါက်မှာ ခု ရေညှိတက်နေပြီ
ရေညှိမျိုးစုံ ထူလိုက်တာ ခွာလို့မရတော့ဘူး
ဒီဆောင်းဦး စောတယ် သစ်ရွက်ကြွေတာ လေထဲ
လိပ်ပြာမောင်နှံတွေ သြဂုတ်နဲ့ ဝါနေကြ
ဒါတွေ ကျွန်မ ထိခိုက်ရ၊ ကျွန်မ အိုသထက် အိုမင်းပေါ့
ကိအန်မြစ်ရဲ့ မြစ်ကျဉ်းကနေ လာမယ်ဆိုရင်
ကျွန်မ ထွက်လာကြိုမယ် ချိုဖူးဆ အထိပဲ။ ။
လီတိုက်ပို (၈ ရာစု)
(၈) ရာစုက တရုတ်ကဗျာကို ဆရာမောင်သာနိုး ဘာသာပြန်တယ်။
ရာစုနှစ်တွေ ခေတ်တွေကို ကျော်ထွက်တဲ့ ကဗျာတွေပဲ ဖြစ်တယ်။ အလွမ်းမှန်အလွမ်းသန်ပုံကိုကြည့်ပါလား၊ ဆီးသီးပြာပြာနဲ့ ကစားတဲ့ လူသားငယ်နှစ်ဦးက အမုန်းမဲ့ သံသယမဲ့ တဲ့။ ဝေးလံတဲ့ ကုတို့အင်ကို ဝဲဂယက်ချာလည် မြစ်ကသွားတော့ခေါင်းထက်မှာ မျောက်တွေ လွမ်းဆွေးဖွယ်အသံပြုနေကြ။ တယ်တဲ့။
အို မျောက်တွေအူတာ က သူ့အလွမ်းကို စေ့ဆော်လိုက်တာလို့မြင်ရတယ်။ ကျွန်မ မြူမှုန်နဲ့ ရှင့် မြူမှုန်နဲ့ နှောစေချင်တယ် တဲ့ အက်တမ်၂ခုကို ပေါင်းချင်တာပေါ့။ လိပ်ပြာမောင်နှံတွေ သြဂုတ်နဲ့ ဝါနေကြ ဒါတွေ ကျွန်မ ထိခိုက်ရပြီး အိုသထက် အိုမင်းရပြီ ကိအန်မြစ်ရဲ့ မြစ်ကျဉ်းကနေ လာမယ်ဆိုရင် ကျွန်မ ကြိုတင်သိ ပါရစေနော်တဲ့ ချိုဖူးဆ အထိ သူထွက်ပြီး လာကြိုပါမယ်တဲ့။ ၈ ရာစုက ကဗျာက အလွမ်းမှန် အလွမ်းသန်လိုက်တာခုထိ လွမ်းရတုန်းပဲ။ နေ့စဉ် သုံးစကားတွေကပဲ သာနေလိုက်တဲ့ အသံတွေ။
ဒီလိုပဲ တောင်ငူခေတ်က မင်းပျို မင်းလွင် အိမ်ရှေ့မင်း နတ်သျှင်နောင်ကို မရဲတရဲ ချစ်ခဲ့ရတဲ့ ရဝေရှင်ထွေးလေးရဲ့ ဝမ်းနည်း မပြေ ဖြစ်ရပုံကိုကြည့်ပါလား......။
( ရဝေ ရှင်ထွေး )တောင်ငူခေတ်
ကဗျာ ၂ ပုဒ်စလုံးက ရှင်းပြမှ ရှုတ်နေဦးမယ်။ ရဝေရှင်ထွေးကလည်း ဒီနေ့ ၂၁ရာစု ရောက်သည်ထိဝမ်းနည်းမပြေတာက ကြာတော့သည်လည်း မောင့်စကား ဆိုတာနဲ့တင်လုံလောက်ပြီး ခေတ်အဆက်ကို ဖြတ်သန်းကာ သူ့အလွမ်းတွေကို သယ်ဆောင်ပေဦးတော့မယ်။
ဩဂုတ်လရောက်တာနဲ့ လိပ်ပြာတွေဟာ ဩဂုတ်နဲ့ ဝါနေကြ တဲ့ (၈) ရာစုက လီတိုက်ပိုရဲ့ မြစ်ကုန်သည်ရဲ့ ဇနီးနဲ့ အလွမ်းသည်းအောင်ရွာနေတဲ့မိုးက လျှပ်စစ်ပါစွက်ပြီး ဖြာတော့သည်လည်း တိမ်ညွန့်ဖျားကိုကြည့်ပြီး ကြာတော့သည်လည်း မောင့်စကားလို့ ရေရွတ်နေရှာတဲ့တောင်ငူ ခေတ်က ရဝေရှင်ထွေး လေးကို အလွမ်းမှန် အလွမ်းသန်တွေပါလားလို့ အလိုလိုမှ အလိုလိုကို သတိရလို့ လာတော့တာပါပဲ။
( ဒီဇိုင်း မျိုးဆွေသန်း )
Posted by Cameron at 22:29 No comments:
လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာက ဓါတ်ပုံအဟောင်းတွေကိုပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်.....။ 2011-2014 ကျွန်မအသက် 36-39 နှစ်အရွယ်တွေမှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေက ဘဝမှာကြည့်အကောင်းဆုံးပုံတွေလို့ ကိုယ့်ဘာသာမှတ်ချက်ချမိတယ်...။ အဲဒီနှစ်တွေတုန်းက ဖြတ်သန်းမှုတွေမှာ ကြည်လင်လန်းဆန်းမှုတွေ လွတ်လပ်မှုတွေ ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ်ရာတွေနဲ့ ပြည့်သိပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတာကို သွားတွေ့တယ်....။ လူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုဟာ မျက်နှာမှာ 80% လောက်ထင်ဟတ်စေတာပဲ....။ သော့ချက်ကတော့ "ချစ်ခြင်းမေတ္တာ" ပါပဲ....။ အဲအချိန်တုန်းက သတိမထားမိခဲ့ပေမယ့် အဲဒီနှစ်တွေဆီကို အခုပစ္စုပ္ပန်ကနေလှမ်းကြည့်တဲ့အခါ ပိုပြီး ထင်သာစွာ မြင်ရတယ်.....။
ဒါပေမယ့်လည်း အဲဒီတုန်းက အချိန်မျိုးအခုပြန်လိုချင်လားလို့မေးရင်တော့.... ဟင့်အင်း မလိုချင်တော့ဘူး...။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝအပိုင်းအခြားဆိုတာ သူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူ ဘယ်ချိန်ဘယ်သူနဲ့ဆုံတွေ့ ကွေကွင်း ပေါင်းစည်းရမယ်ဆိုတာ ပါလာပြီးသား....။ ဖန်တီးယူချင်တိုင်း ယူလို့ရတာမဟုတ်ဘူး.....။ ခုလက်ရှိအချိန်မှာလဲ သူ့လက်ရှိအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပျက်ပါစေ...။ ခုပျော်နေပေမယ့် နောက် စက္ကန့်ပိုင်း မိနစ်ပိုင်းမှာပဲ ဘာဝမ်းနည်းစရာတွေကြားရ ကြုံရမယ်ဆိုတာ ဘာမှအတတ်မပြောနိုင်ဘူး...။ ဘာမှမသေချာ မရေရာတဲ့ ဘဝကြီးပဲ...။ မျှော်လင့်မထားတဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ကြည့်ပြီး သံဝေဂတွေ ရသထက်ရနေတာ....။
တကယ်ဆို ကျွန်မတို့မှာ အချိန်သိပ်မရှိတော့ဘူး ဘယ်နေ့ဘာဖြစ်မယ် မသိတဲ့ဘဝမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ အမုန်းမပွား ရန်မလိုဘဲ မေတ္တာတရားတွေနဲ့ လူတိုင်းအပေါ်ကို Positive thinking နဲ့ပဲ တွေးမြင်ကြစေလိုတယ်....။ ကိုယ်ရန်သူကိုမှလည်း အမုန်းမပွားစေချင်ဘူး....။ ပုထုဇဉ်အနေနဲ့ ခက်ခဲမယ်ဆိုတာသိပါတယ်....။ ဒါပေမယ့် ကြိုးစားကြည့်ပါ....။ မေတ္တာတရားတွေနဲ့ နေထိုင်ကြည့်ပါ အရမ်းကို အေးချမ်းတာကို ကိုယ်တွေ့ခံစားရမှာ....။
ခုကာလမှာ အသိမိတ်ဆွေထဲကရော အမျိုးမကင်းသူတွေထဲကရော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေထဲကရော ဟိုလူ့အဖေဆုံးပြန်ပြီ ဒီလူ့အမေဆုံးပြန်ပြီ ဟိုလူကတော့အောက်စီဂျက်ကျနေလို့ ဒီလူကတော့အနံ့တွေပျောက် တချို့ကျတစ်အိမ်လုံးဖျားနေကြပြီနဲ့ အမျိုးစုံကြားနေရတာ တကယ်စိတ်မချမ်းသာရဘူး....။ ကိုယ်တိုင်ကလဲ အိမ်ထဲအိမ်ပြင်တတ်နိုင်သလောက်မထွက်တော့ အိမ်ကနေ ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲလို့စဉ်းစားကြည့်တော့ အွန်လိုင်းကနေ သူတို့လိုအပ်တဲ့ အစားအသောက်တွေ မှာပေးတာတို့ လိုအပ်တဲ့ဆေးတွေရနိုင်တဲ့နေရာတွေစုံစမ်းပေးတာတို့ အောက်စီဂျင်အိုးတွေငှားပေးတာတို့ကို တတ်နိုင်သလောက်လုပ်ပေးဖြစ်တယ်....။ ညဖက် ဘုရားရှိခိုးအမျှဝေပြီး တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာ မေတ္တာဓါတ်လွှတ်ပြီးဖြန့်တာ လုပ်ပေးဖြစ်တယ်....။ ကိုယ်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးချင်တဲ့သူရဲ့ နာမည်ကို စိတ်ထဲကခေါ် မျက်နှာကိုမြင်ယောင်ပြီး ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေ ကိုးဗစ်ကပ်ရောဂါကိုလည်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ သေချာအာရုံပြုပြီး မေတ္တာပို့ပေးတာလုပ်ဖြစ်တယ်....။ အနည်ဆုံးငါးပါးသီလမြဲပြီး သမာဓိကောင်းရတယ်...။ နေမကောင်းဖြစ်နေကြတဲ့ အသိမိတ်ဆွေ သုံးလေးအိမ်ကိုလုပ်ပေးတာ သုံးရက်မြှောက်မှာပဲ Feedback လေးသိချင်လို့ ဖုန်းဆက်မေးတော့ အဖျား ၁၀၄ နဲ့ ဝမ်းလဲလျှော အောက်ဆီ ၈၀ အောက်ရောက်လို့ ရှူနေရတဲ့ အန်တီကြီးက အောက်စီဂျင်လွတ်ပြီး တော်တော်ပြန်သက်သာလာတယ်....။ သူငယ်ချင်းအမေကျတော့အနံ့ပျောက် အောက်စီမကျ အဖျားမရှိ အသက်ရှစ်ဆယ်ကျော် ဘာအစားမှမစား ကျွေးမရ မျော့မျော့လေးဖြစ်နေတာ အဲအန်တီလဲ အခုပြန်လန်းလာပြီး ငှက်သိုက်တွေ Ensure တွေသောက်နိုင်နေပြီ....။ နောက်တစ်အိမ်လုံးဖျားနေတဲ့ မောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့မိသားစုလည်း အဖျားပြန်ကျသွားကြတာကို သိရတော့ တကယ်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်သွားခဲ့တယ်.....။ ကိုယ်ပို့ပေးတဲ့ မေတ္တာတွေက Effective တကယ်ဖြစ်တာပဲလို့....။ သူတို့ရဲ့ ကံတရားနဲ့ အချိန်မတန်သေးတာလဲပါမှာပါ ကျွန်မတဖက်တစ်လမ်းက ပို့ပေးနိုင်တဲ့မေတ္တာဆိုတာ ကံအကူတစ်ခုအနေနဲ့ပဲလေ....။ သေခြင်းတရားကိုတော့ လူတိုင်းပြေးမလွတ်။
ဒီနှစ်လည်းဝါတွင်းသုံးလ သက်သတ်လွတ်စားဖြစ်တယ်.....။ ခုချိန်မှာ အသားစားမှ အဟာရရှိတာစားမှ ကိုယ်ခံအားကောင်းမှာလို့ပြောနေကြပေမယ့်.... ကျွန်မကတော့ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်စားတာပါ....။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုအဟာရဖြည့်တင်းရမယ် ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိနေရင် စောင့်ရှောက်နိုင်ပါပြီ...။ အသားငါးရှောင်ရင် ကိုယ်စောင့်နတ်တွေ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေ နိမိတ်ပြပေးတတ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်လားမသိ....။ ဟိုတလောက ဆွေးမကင်းမျိုးမကင်းထဲက အသက်ရှစ်ဆယ်ကျော်အဖိုးကြီးတစ်ယောက် မဆုံးခင်မနက် မိုးမလင်းခင်က အိပ်မက်ထဲမှာ အနက်ရောင်တွေချည်းဝတ်ထားတဲ့ လူတစ်စုကိုမြင်မက်တယ်....။ မနက် ခုနှစ်နာရီခွဲတော့ နာရေးသတင်းကြားရတယ်....။ တိုက်ဆိုင်တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်...။ ကျွန်မရဲ့ Lucky Color က အနက်ရောင်ဆိုတော့ ကျွန်မအိပ်မက်ထဲက အနက်ရောင် Suit တွေဝတ်ထားတဲ့ သားသားနားနား စတိုင်လ်မိုက်မိုက်ဘဲကြီးတွေက ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ်တွေလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်...။ တချို့က Bow တောင်တပ်ထားသေး....။ ပြောချင်တာက ကျွန်မ နိမိတ်တွေကို ကြိုမြင်မက်တတ်ခဲ့ဖူးတာ အရင်ရွှေဝါရောင်အရေးခင်းမဖြစ်ခင်လပိုင်းလောက်က ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနဲ့ ဆူးလေမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကို အိပ်မက်ထဲမှာကြိုမြင်ခဲ့ဖူးတယ်....။ တကယ်အပြင်မှာ အဲတိုင်းဖြစ်တာကိုသိရတော့ တကယ်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ရတယ် အဲတုန်းက....။ မကောင်းတာပဲကြိုသိရမယ်ဆိုရင်တော့ နိမိတ်တွေကိုကြိုမသိချင်ပါဘူး...။
ကျွန်မဘလော့ကို စာဖတ်သူ တစ်ယောက်က 2018 တုန်းကတင်ခဲ့တဲ့ ပို့စ်အဟောင်း တစ်ခုကိုလာဖတ်သွားတာတွေ့တယ် ....။ အဲတုန်းက June လလောက်မှာ ကျွန်မ အနံ့ပျောက်လို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဘယ်လိုတွေကုခဲ့ရသလဲဆိုတာတွေရေးတင်ခဲ့ဖူးတယ်....။ အခုဖြစ်ပျက်နေတာတွေနဲ့ တထေရာထဲပဲ ဂျင်းပြုတ်ရည်သောက်ရတာ ငှက်သိုက်တွေသောက်ရတာစတဲ့ ကုထုံးတွေအကုန်ပဲ.....။ ကျွန်မ ဒီဝေဒနာတွေကို လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကတည်းက ကြိုဖြစ်ခဲ့ဖူးတာပဲလို့တွေးဖြစ်သွားခဲ့တယ်....။ အဲတုန်းက ပို့စ်နှစ်ခုကို အောက်မှာလင့်ပြန်ချပေးခဲ့မယ်နော် ပြန်ဖတ်ချင်ရင်...။
Good Small to You
ဘလော့မောင်နှမတွေထဲကရော ဘယ်သူတွေနေမကောင်းဖြစ်လဲ ကျွန်မက ဖေ့စ်ဘုတ်မသုံးတော့ သူတို့နဲ့အဆက်သွယ်မရှိ တီတင့်နဲ့တော့ ဟိုတလောက Telegram မှာ နှုတ်ဆက်ဖြစ်တယ်....။ မယ်နှိုင်းလဲ နေမကောင်းဖြစ်တာ ခုပြန်ကောင်းနေပြီ ကိုညိမ်းနိုင်လဲ Recovery ပြန်ဖြစ်နေပြီ ....။ P ဖြစ်ပြီး Antibody ထွက်သွားရင် ခြောက်လလောက်က ဗိုင်းရပ်စ်မကူးနိုင်သေးဘူးဆိုပေမယ့် ....အားနည်းနေချိန်မို့ ရောဂါအခံရှိသူတွေ ပိုပြီး ဂရုတစိုက်ရှိပေးပါ....။ ကိုယ်ခံအားတက်အောင်နေထိုင်စားသောက်ပါ သိပ်ပင်ပန်းတဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေမလုပ်ပါနဲ့ဦး စိတ်ကိုပျော်ရွှင်အောင်နေပါ အနားကောင်းကောင်းယူပါလို့ မှာချင်ပါတယ်....။
ကျွန်မကတော့ အမျိုးအရင်းတွေရဲ့နည်း (ဗီယက်နမ်နည်း)ဖြစ်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းထဲ သံပုရာသီးတစ်ဝက်လောက်အခွံပါထည့်ပြီး ရေနွေးဆူဆူခတ် အဲဒီလက်ဖက်ရည်ကြမ်းကို တစ်နေကုန် ရေနွေးထပ်ထပ်ဖြည့်ပြီးသောက်တယ်....။ ကိုးဗစ်ပျောက်တဲ့ဆေးတော့မဟုတ်ပေမယ့် ကာကွယ်တဲ့နည်းလေးပါ ကိုယ်ခံအားတက်စေတယ် Antioxidant ဖြစ်တယ်....။ ကာကွယ်ဆေးထိုးတယ်ဆိုတာကလဲ အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုထိပဲခံတာ ဆိုတော့….။ ရေများများလဲသောက်ပေးတယ် သက်သတ်လွတ်စားသူမို့ ပဲတွေစားပေးတယ် ဟင်းရည်က အရိုးပြုတ်ရည်သောက်မရတော့ အရွက်ပြုတ်ရည်တွေသောက်ပေးတယ်....။ ရှမ်းဟင်းစားနေကျမို့ မုန်ညင်း ဇူကာညွှန့် ဖရုံသီး ဗူးညွှန့် ဟင်းနုနွယ် အဲလိုအရွက်တွေကို ပဲပုတ် ကြက်သွန်ဖြူ ဂျင်း ငရုတ်သီးစိမ်းလေးထောင်းပြီးခတ်ထည့်တဲ့ ဟင်းရယ်ပူပူလေးတွေလုပ်သောက်ဖြစ်တယ်....။
ဒီပို့စ်ကို မနေ့က ဖုန်းနဲ့ထိုင်ရေးတာ အပြီးသတ်နေပြီ အဲဒါလက်နဲ့သွားထိမိပြီး အကုန်ပျောက်သွားတာ...။ ဒါနဲ့ အစအဆုံး အသစ်ပြန်ရေးရတယ်....။ အရင်လိုစိတ်နဲ့ နှမြောတသတာတွေဘာတွေ သိပ်မဖြစ်တော့ဘူး....။ ပျက်သွားလဲ အသစ်ပြန်ရေးလို့ရတာပဲ အဓိကအကြောင်းအရာကသိပြီးသား အရေးအသားနဲ့စကားလုံးတွေပဲ နဲနဲပြောင်းသွားမယ်....။ အဲဒါပဲ လောကမှာ ဘာမှမတည်မြဲဘူးဆိုတာ.....။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဖက်ကနေ တွေးတော ဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အကျင့်မို့လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်တယ်....။
ဒီကပ်ရောဂါဆိုးကြီးက ဘယ်တော့ပြီးဆုံးသွားမလဲမသိနိုင်သေးဘူး အခုကြားရတာတော့ အစဖြစ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်ပြည် ဝူဟန်ကို Delta ကြီးက ဝင်မွှေနေလို့ သူတို့တစ်မြို့လုံး လူဦးရေ ငါးသိန်းလောက်ကို ဆေးစစ်တာတွေ တချို့ နေရာတွေကို lock down တွေချနေပြီတဲ့....။ မြန်မာပြည်မှာတော့ တတိယလှိုင်းနဲ့စတုတ္ထပေါင်းမိသွားပြီလဲပြောတယ်...။ ခုနောက်ဆုံးရသတင်းကတော့ Delta Plus တဲ့ ကိုးရီးယားမှာ စဖြစ်နေပြန်ပြီတဲ့....။ အောင်မလေး.... ဘယ်တော့မှ ပြီးဆုံးမလဲမသိတော့ပြီ....။ လှိုင်းဆိုတာ အမြင့်ဆုံးရောက်ရင် အောက်ကိုပြန်ကျရစမြဲပဲမို့ ကြံ့ကြံ့ခံထားကြပါ.....။ ပြီးတော့ အဦးဆုံးစဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဝူဟန်ကို ဗိုင်းရပ်စ်က တစ်ပတ်လည်ပြန်ရောက်သွားတာဟာလဲ အဆုံးသတ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..(ကျွန်မရဲ့ တကိုယ်စာအတွေး)....။
အားလုံးကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ ကပ်သုံးပါးမှလဲ ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်.....။
Posted by Cameron at 12:13 No comments:
မိုးရွာရင်ပျော်ပေမယ့် ဒီနှစ်ကိုတော့ မိုးတွေမရွာစေချင်ဘူး....။ မိုးတွေစွေလာရင်ပဲ စိုးရိမ်ပူပန်မှုပေါင်းစုံနဲ့ မိုးစက်တွေနဲ့အတူ ရောပါလာမယ့် မမြင်နိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ အန္တရာယ်ဆိုးတွေကို အာရုံရနေတယ်....။
​ဒါပေမယ့် နာကျင်စရာတွေကိုတော့ ဆေးကြောသွားပေးပါ...။
Let the rain wash away, all the pain yesterday……
ကိုယ်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီး အင်တာဗျူးတစ်ခုကိုနားထောင်နေတုန်းမှာပဲ.... မက်ဆေ့ချ်လေးတစ်ခုတက်လာတဲ့အသံကြားလိုက်တယ်...။ လွန်ခဲ့သော ရက်များက ဘာ Series တွေကြည့်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ်ချန်ထားခဲ့တဲ့ မက်ဆေ့ချ်ကို သူ💖လာပေးသွားတာ...။ အိမ်တွင်းအောင်းကာလတွေမှာ ကိုယ်အပျင်းပြေကြည့်ဖို့ သူ Movie တွေ Series တွေ Link ပို့ပေးတတ်တယ်....။ ဘာလိုလိုနဲ့ ဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်နေရတာ တစ်နှစ်ခွဲရှိသွားခဲ့ပြီ ....... ။
အပြင်မှာ မိုးတွေ.....ဖွဲဖွဲရွာနေတယ်.....။ မိုးငွေ့တွေကိုဖြတ်တိုက်လာတဲ့ လေတွေက အေးစိမ့်နေတာပဲ....။ ဝရံတာမှာစိုက်ထားတဲ့ စပါယ်ပန်းအိုးမှာ အဖူးတွေအများကြီးဖူးနေပြီ...။
"နေကောင်းလား" လို့ ကိုယ်နှုတ်ဆက်တော့.... သူလဲကိုယ့်ကိုပြန်နှုတ်ဆက်တယ် ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ့်နာမည်စာလုံးပေါင်းအမှားနဲ့လေ....။ ဟိုတစ်ခါက တစ်ခါလေးပါပဲ ကိုယ့်နာမည်အမှန်လေးနဲ့လာနှုတ်ဆက်တော့ ဒီတစ်ခါ နာမည်မှန်သွားပြီလို့ ကိုယ်ပြောတော့ သူအမြဲနာမည်အမှားရေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ဖူးတယ်....။ ကိုယ်ကတော့ သူမှားရေးတဲ့နာမည်ကိုတောင်အသားကျပြီး ကြိုက်တတ်နေပြီ....။ နောက်ပိုင်းလဲ သူကိုယ့်နာမည်စာလုံးပေါင်းအမှားနဲ့ပဲ(ကိုယ်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့) ဆက်ခေါ်ခဲ့တယ် ခုထိပဲ...။
ခုလိုချိန် အခိုက်အတန့်မှာ နေကောင်းကျန်းမာနေပါတယ်လို့ ကြားသိရတာဟာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပါပဲ....။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားရှိတာတွေစားပါ ကိုယ်ခံအားတက်အောင်နေပါ.... တရားထိုင်ရင်းအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးပါ အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပါ စတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စကားတွေစမြည်ပြောဖြစ်ကြတယ်....။
ညရှစ်နာရီနောက်ပိုင်းဆို ကိုယ်လက်သန့်စင် ဘုရားရှိခိုးတဲ့ဝတ်စုံ ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နဲ့ တစ်နေရာဆီပေမယ့် ကိုယ်တို့တရားအတူတူထိုင်ကြတယ်....။ လောကမှာ မကောင်းမှုတွေများလာလို့ ရာသီဥတုတွေဖေါက်ပြန် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ ကပ်ဘေးဆိုးတွေ ကျရောက်ရတာ ကမ္ဘာကြီးကဒဏ်ခတ်တာတဲ့...ဒါဖြင့်လဲ မကောင်းတကာ့အကုန်လုပ်ကြတဲ့ ဟိုလူတစ်စုကို မြန်မြန်ဒဏ်ခတ်ပါတော့.....။
နောက်ဆိုရင် ကိုယ်တို့နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာမှာ မေတ္တာတရားပြည့်ဝတဲ့ သူတွေပဲ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ ဘာသာရေးဟောကိန်းတွေနဲ့ ခန့်မှန်းကြတယ်...။ ဒါသိပ်ကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိတာပဲလေ....။ အဲဒီထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဖို့ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်လုပ်မှ ကျင့်ကြံအားထုတ်မှရမှာ....။ ဘယ်သူတရားဖျက်ဖျက် ကောင်းမှုတွေကိုပဲလုပ်ဆောင်ပါ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ မိဘတွေနဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကို ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပါ...။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ နေထိုင်သွားပါ ကလေးရေ....။ ပြန်လည်လန်းဆန်းနေကောင်းလာမယ့် ကမ္ဘာကြီးကို ကိုယ်တို့အတူစောင့်ကြည့်ရဦးမယ်မဟုတ်လား.....။
Take Good Care and God Bless you…..
Get well soon ….❤️‍🩹
21th July 2021, 7:57PM
ခုကြည့်နေတဲ့ Channel3ကလွှင့်တဲ့ Thai Series
Dare to Love OST (I promise you, Korean Version)
Posted by Cameron at 09:57 No comments: